Zimbabwe opposition leader Morgan Tsvangirai dies at 65 - The Middletown Press
Andrew Meldrum and Farai Mutsaka, Associated Press
Updated 12:45 am, Thursday, February 15, 2018
FILE -- In this Nov. 30, 2016 file photo, Zimbabwe's main opposition leader Morgan Tsvangirai is photographed during an interview with the Associated Press in Harare. Zimbabwe opposition leader Morgan Tsvangirai has died at age 65, party spokesman said on Wednesday, Feb. 14, 2018. less
FILE -- In this Nov. 30, 2016 file photo, Zimbabwe's main opposition leader Morgan Tsvangirai is photographed during an interview with the Associated Press in Harare. Zimbabwe opposition leader Morgan ... more
FILE - In this Tuesday, Nov, 21, 2017 file photo, Morgan Tsvangirai, the main opposition leader in Zimbabwe addresses protestors outside parliament building in Harare. Zimbabwe opposition leader Morgan Tsvangirai has died at age 65, party spokesman said on Wednesday, Feb. 14, 2018. less
FILE - In this Tuesday, Nov, 21, 2017 file photo, Morgan Tsvangirai, the main opposition leader in Zimbabwe addresses protestors outside parliament building in Harare. Zimbabwe opposition leader Morgan ... more
FILE - In this Wednesday, March, 9, 2016 file photo, Morgan Tsvangirai, center, one of the main opposition leaders in Zimbabwe addresses a crowd taking part in a demonstration of activist Itai Dzamara in Harare. Zimbabwe opposition leader Morgan Tsvangirai has died at age 65, party spokesman says. less
FILE - In this Wednesday, March, 9, 2016 file photo, Morgan Tsvangirai, center, one of the main opposition leaders in Zimbabwe addresses a crowd taking part in a demonstration of activist Itai Dzamara in ... more
FILE - In this Saturday, Aug. 5, 2017 file photo, Zimbabwe's main opposition party leader Morgan Tsvangirai pauses as he addresses supporters at a rally in Harare. Zimbabwe opposition leader Morgan Tsvangirai has died at age 65, party spokesman said on Wednesday, Feb. 14, 2018. less
FILE - In this Saturday, Aug. 5, 2017 file photo, Zimbabwe's main opposition party leader Morgan Tsvangirai pauses as he addresses supporters at a rally in Harare. Zimbabwe opposition leader Morgan Tsvangirai ... more